Maxaa laga Bartay Kulankii El-Clasico ee Barcelona vs Real Madrid..??
Wednesday, January 23rd, 2019 - 21:36:41
Monday May 07, 2018 - 11:34:34 in Wararka by
Kulanka ugu weeyn kubadda cagta ee El-Clasico ayaa ksuoo dhamaaday Bareejo 2-2 ah oo ay ku heshiiyeen kooxaha Barcelona iyo Real Madrid oo Ciyaarta ay u dhaxeysay.
Clasico ayaa ah kulan Taariikhi ah oo marxalado kala duwan soo maray, waqtigan ayuu kusoo aaday iyada oo aan dhinaceeda dhulka la dhigin Barca dhamaan kulamadii sanadkaan ay ciyaartay Horyalka LaLiga.
Ciyartaan ayaa waxaa qaado u ah in la qaatao Kaarka Guduudan sidoo kalana karaka Jaalaha ah sida Biyaha loo cabo, Kulankii xalay ee labada koox ay is mari waayeen waxaa karaka Guduudan laga qaatay Barceloana oo 10-laacib ku ciyaareysa Qeytii labaad ee Ciyaarta.
Hadaba waxa aan halkan ku soo bandhigi doonaa xogtii laga diwaan galiyay kulankii xiisaha lahaa El-Clasico:
1.Andre Iniesta ayaa ciyaaray kulankiisii ugu dambeeyay ee El Clasico kadib markii uu shaaciyay in uu ka tagi doono kooxda dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Xiddiga khabiirka ah ayaa gaaray rikoore badan oo kulanka El Clasico kadib markii uu ciyaaray kulankiisii 38-aad isaga oo ah xiddiga 3-aad ee ugu safashada badan kulanka kana dambeeya xiddiga Xavi iyo Raul oo ah xiddigaha ugu safashada badan iyaga oo saftay 42 kulan.
2.Tababare Zinedine Zidane ayaan wali wax guuldaro ah kala kulmin garoonka Barcelona ee Camp Nou marka uu soo booqdo kulanka El Clasico isaga oo soo booqday 3 kulan, laba kulana bar-baro la galay hal kulana guul ka gaaray.
3.Kulanka ayaa ka mid ahaa kulamada ugu kaararka badan taariikhda El Claisoc iyada oo 5 kaar oo digniin ah la siiyay xiddigaha Real Madrid kadib 19 khalad oo ay galeen halka xiddigaha Barcelona la siiyay 3 kadib 7 khalad oo ay galeen waxana kaarka cas ee tooska ah loo taagay daafaca Sergi Roberto kaas oo feedhay Marcelo.
4.Gareth Bale ayaa dhaliyay soonkii goolasha ee kulanka El Clasico isaga oo dhaliyay kulankiisii ugu horeeyay ee El Clasico La Liga tan ilaa 2014 markaas oo uu gool dhaliyay finalkii Copa Del Rey-ga.
5.Cristiano Ronaldo ayaa dhaliyay 43 gool oo tartamada oo dhan ah xilli ciyaareedkan waxana uu dhaafay rikoorkiisii xilli ciyaareedkii hore ee 42 gool ahaa halka uu sidoo kale dhaliyay goolkiisii 25-aad ee horyaalka xilli ciyaareeedkan.
6.Ronaldo aya dhaliyay 21 gool 11-kii kulan ee ugu dambeeyay ee horyaalka La Liga isaga oo sidoo kale caawiye ka noqday 3 kale kulamadaas.
7.Lionel Messi ayaa kor u qaaday goolashiisa El Clasico isaga oo ka dhigay 26 gool tartamada oo dhan halka uu sidoo kale Kulamada La Liga ee El Clasico dhaliyay 18 gool.